Kunamata Kunongedzera pakumirira kuna ishe | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Munyengetero Pfungwa dzeminamato pakumirira ishe
Pfungwa dzeminamato pakumirira ishe
Nhasi tichave tichitarisana neminamato mapoinzi pakumirira kuna Ishe. Kazhinji, apo Mwari anovimbisa kutipa chimwe chinhu, kuratidzwa kwezvinhu izvo hakungoerekana kwaitika. Kazhinji kacho muedzo wekutenda kwedu munaIshe. Kutora chirevo kubva kunyaya yaAbrahama mushure mekunge Mwari amuraira kuti asiye imba yababa vake naamai vake kunzvimbo yaachazoratidzwa. Mushure maizvozvo, Mwari akamuudza kuti afambe pamberi pake uye ave akakwana, uye achasimbisa sungano yake naAbrahama.
Vimbiso huru kuna Mwari kuna Abhurahamu yaive yekumuita baba veMarudzi mazhinji, nepo Abrahama nemukadzi wake Sara vaive vasingabereki. Uye zvisinei nevimbiso yaMwari nesungano paupenyu hwaAbrahama, akaramba asingabereki. Pane dzimwe nguva apo Mwari anoda kuti tiratidze hunhu hwakanaka patinenge takamumirira. Muhurongwa hwaMwari, pane nzvimbo inonzi yekumirira imba. Kana isu tisati tagamuchira kuzadzikiswa kwevimbiso, tinenge tiri mumba yekumirira. Maitiro edu mukumirira ikoko anozotarisa kuti maropafadzo iwayo angauya nekukurumidza zvakadii. Nyaya yevaIsraeri muenzaniso wakanaka. Mwari akavimbisa kuvapinza munyika yeKenani, uye akavimbisa kuti rwendo rwacho rwunove rwemazuva makumi mana neusiku, zvisinei, nekuda kwehunhu hwavo hwakaipa, rwendo rwakazoguma rwave makore makumi mana.
Isuwo, pane imwe nguva nenguva, tichava muimba yekumirira. Tinofanira kunamatira nyasha dzaMwari kuti tiratidze hunhu hwakanaka isu takamirira. Vamwe vanhu vazhinji pane imwe nguva vakarasikirwa nemaropafadzo aMwari nekuti vanononoka kumirira Ishe, kusashivirira kwavo kwakaita kuti vataure kuna Mwari vachikumbira kuvimbiswa kana achiri kugona kuita zvaakavavimbisa. Ndinoraira kuti nenyasha dzaMwari Wemasimbaose, hauzorasikirwa nemaropafadzo aIshe. Nyasha dzekuchengetedza hunhu hwakanaka iwe uchimirira paIshe uye nyasha dzisingambofa dzakarasa tariro pane zvese zvipikirwa zvake, ndinonamata kuti Mwari azvipe kwauri.
Paunenge uchiverenga chinyorwa ichi, iwe unogona here kuwana hushingi hwekumirira kusvikira Mwari vapindura munamato iwoyo muzita raJesu? Tora nguva yako kuti uverenge iyi minamato zvinobudirira, itaure kakawanda kuti uwane simba, uye Mwari vanozozvipa kwauri.
Ishe Jesu, ndinokutendai nezvivimbiso zvenyu kwandiri. Ndinokutendai nekuti makandiona ndakafanira kugamuchira kubva kwamuri. Ndinokutendai neropafadzo ramakandivimbisa murugwaro, ndinokutendai neavo vamakandivimbisa kuburikidza nemuporofita wenyu, uye ndinokutendai neavo vamakandiudza pachenyu. Ishe, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu. Baba Ishe, ndinoziva kuti parizvino ndiri muimba yangu yekumirira, Ishe, ndokumbirawo mundipewo nyasha kuti ndiratidze hunhu hwakanaka pandakamirira kwamuri. Vapei simba nguva dzose kuti vandipe nyasha yekusazomborasa tariro mamuri. Uye kusvikira iwe waunza izvo zvivimbiso kuchiratidziro, ndipe iyo nyasha yekuramba ndakamirira mukutendeka kwakanaka.
Baba Tenzi, ndinopesana nemhando dzose dzekuvhiringidzika, ndinoisa mhando dzese dzemiyedzo pasi pezita raJesu. Zvese nehurongwa hwadhiyabhorosi kuti ndiite kuti ndichinje maziso angu abve pauri. Zano rese remuvengi kundiita kuti ndibudirire mune imwe nzvimbo, Ishe Jesu, ndinoparadza zvirongwa zvakadaro muzita raJesu. Nekuti ndinoziva kutambudzika nematambudziko andiri kusangana nawo zvino hapana kana zvichienzaniswa nemaropafadzo nembiri yauinayo mudura kwandiri, Ishe, ndokumbirawo mundibatsire kuti ndisarase muzita raJesu. Ini handidi kupotsa maropafadzo ako nekuti handina kukwanisa kumirira zvishoma, ipa moyo murefu kuti urambe wakamirira iwe. Kungofanana nevaHeberu vatatu vakapika kuti havazoramba Mwari kunyangwe ichipisa moto, ndipeiwo nyasha ndisambokotama kutenda kwangu kumanikidziro ehupenyu.
Ishe Jesu, ndinoziva kumirira pauri kunogona kushushikana, iko kuvava kwemoyo uye kutukwa kwakaipa kunobva kuvanhu kunogona kukonzera chero murume kudzokera shure. Asi Mwari, ndinonamata kuti simba rive rakasimba pamberi penyu, nyasha dzekumirira nguva dzose, nyasha dzirege kutsauswa nekutongwa kwevanhu, nyasha dzisakundwa nekubudirira kwevamwe, ndinonamata kuti mundipe izvi nyasha muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti nenyasha dzenyu mukurumidze kuratidzwa kwemaropafadzo iwayo. Nekuti rugwaro runoti zvinotarisirwa zvechisikwa zvakamirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari. Ishe, vanhu vakatarisa kumusoro kwandiri, vari kunditarisa zvine simba kuti vaimbe nziyo dzangu pandinohwina uye vandipe mhosva kana ndakundikana. Baba, kubudirira kwechisikwa, kwakamirira kuratidzwa kwangu semwanakomana wako, baba, ndinonamata kuti iwe uzadzise zvese zvawakavimbisa pane zvangu muzita raJesu. Ndinochema pamberi pako nhasi, ndinokumbira neropa rakakosha raKristu rinotaura kururama kupfuura ropa raAbheri, ndinonamata kuti netsitsi dzako dzinogara nekusingaperi usazondirega ndichipotsa usati waita zvawakavimbisa pamusoro pehupenyu hwangu muzita zvaJesu.
Ishe Jesu, rutendo rwemurume runomira mugore kana tariro nezvitarisiro zvakareba. Baba, netsitsi dzenyu, ndinoziva kuti hamusi munhu kunyepa; kana iwe hausi mwanakomana wemunhu kuti utendeuke. Ndinoziva zvechokwadi kuti iwe uchazadzisa izvo zvipikirwa pahupenyu hwangu. Netsitsi dzenyu, ndinonamatira kukurumidza kuzadzikiswa kwemaropafadzo iwayo muzita raJesu. Ishe batsirai tariro yangu, simbisai kutenda kwangu kubudikidza nekuratidzwa kwemaropafadzo iwayo muzita raJesu.
Previous nyayaKunamatira Kubatsira Uye Kutungamira
inoteveraKununurwa munamato kubva kumweya wekubhejera
Minamato Pamusoro Pokupfeka Nhema Tambo Muhope